Palandöken iyo Konaklı Ski Center waxaa loo wareejiyay Dowlada hoose ee Magaaladda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewPalandöken iyo Konakli Ski Center waxay u wareejiyeen Dawladda Hoose
02 / 09 / 2016 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TELPHER
Duqa magaalada Palandöken iyo Konaklı ayaa waxaa loo wareejiyay magaalada caasimadda: Duqa Erzurum Mehmet Sekmen ayaa sheegay in bedelka Xarumaha Palandöken iyo Konakli Ski ee xarun ka ah Maamulka Cusub ee Wasaarad-Nabadgalyada oo si habsami leh loo siiyay ka dib markii ay dhamaystirteen cilladaha degmada gudaheeda.
Xarumaha Palandöken Cafe 25 ayaa lagu qabtay shir jaraa'id oo ka dhacay Duqa Erzurum Mehmet Sekmen, Ku-xigeenka duqa magaalada Erzurum Eyup Tavlasoglu, Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Selami Keskin iyo xubno ka tirsan saxaafadda.
Duqa magaalada Mehmet Sekmen, oo warfidiyeenka u waramay wariyeyaasha ku saabsan xarumaha kuraasta shirarka, ayaa sheegay in iibinta Palandöken iyo Konakli Ski Centers dhamaystireen. Sekmen ayaa yiri, "Waxaan dhamaanteen dooneynay maamulka maamulka Palandöken iyo Konakli Ski. Hormarinta ayaa si buuxda loo xaqiijiyay. Waxaan dooneynay inaan soo saarno xaaladda xarumahan ku aadan xubnaha saxaafadda. Waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaagno khilaafaadka ka dhexeeya maaraynta fog iyo maareynta maxaliga ah ee ganacsiga. Xarumahan waxay halkan joogeen sanado badan, laakiin dhibaatooyinka dadka soo socda iyo kuwa lagu dhex yaalo halkan lagama xalin. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego sida ugu dhakhsaha badan dhibaatooyinkaas loo xalliyo. Tani waa ujeedada qalabkeena
Mashruuc ballaaran oo loogu talagalay Metropolitan Palandöken iyo Xaruunta Kayli Ski "
Isbeddelka xarumaha Palandöken iyo Konakli Ski, oo ka dhacay cillado waaweyn sanadihii hore, ayaa sheegay in dhibaatada weyn ee soo gaartay sanadihii hore, Duqa Magaalada Erzurum Mehmet Sekmen, uu yiri:
"Waxaa jira khasaare weyn oo ku yimid Palandöken iyo Xarunta Ski ee Kayli. Waxaan rabaa in aan marka hore ku xisaabiyo cilladaha sariiraha Palandöken. Waxaan leenahay la'aanta baarkin. Muwaadiniinta halkan yimaada waxay ku adagtahay xaaladdan. Xafiisyada la-talinta waxay u baahan yihiin in la dhiso, waxaan rabnaa in aan ka dhigno kafateeriyada dadweynaha. Dhibaatada ugu weyn waa in aan leenahay gabdhahaan dumarka ah iyo maya maya. Waan qaban karnaa. Waxaan leenahay masaajid. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku rakibno saldhigyo kulul / qabow oo qabow ku jira wadooyinka. Ka dib markii barafka, muwaadiniinteena waxay u yimaadaan inay cabaan wax kulul / qabow. Waxaan dooneynaa inaan ka shaqeyno balli. Waxaan dhisi doonnaa khadad gaadiidka Palandöken-Konaklı si ay u xalliyaan dhibaatooyinka iyaga oo matalaya gaadiidka. Dhibaatooyinka kale, waxaanu furi doonaa wadooyinka la daboolay. Dragon, dooxada, wadada 27. Hawlgalka Gondola 2, hawlgalka habboon ee habka tigidhka lagu ciyaaro, ilaalinta nidaamka barafka iyo qalabka mashiinka. Waxaa jira kamarad amaan la'aan. Qorshaha waxqabadka goobidda iyo samatabbixinta iyo ka-daad-gureynta waa in lala sameeyaa kooxda iyo qalabka loo baahan yahay in la dhiso. Nidaamka xawaaraha 4 wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso, ma jiro khariidadda hadda ee buurta, waana inay noqotaa mid cusub. Guryaha kalkaalintu waa kuwo aan ku filnayn oo ay leeyihiin dhibaatooyinka kuleylka iyo kaabayaasha. Dhismayaasha oo dhan waxay leeyihiin dhibaatooyin biyaha iyo saqafka, sidaas darteed dayactir iyo dayactir dhismayaasha ayaa loo baahan yahay. Ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan buuraha iyo magaalada. Duulimaadyadu waxay leeyihiin kaabayaal iyo dhibaatooyin dhinaca biyaha ah. Macaamiisha iyo macaamiisha macaamiisha dukaanka ma leh dukaanka. Ugu dambeyntii, la'aanta ATM-yada ee la'aanta dadka muwaadiniinta ah sidaas darteed waa in ay hoos ugu tagaan bartamaha magaalada. Waxaan isku dayi doonaa inaan dhameystirno qaladaadahan. Xadiiqada Konakli waa mid la mid ah cilladda Palandökende. Waxaa jira dabayl xooggan oo ka jirta aagga sababtoo ah meeleyntii khaldan ee kayimaadkeena kaymaha ee Konakli, sidaa daraadeed qalabku wuxuu u furan yahay kaliya maalinta 135 ee maalinta 30. "
"Waxaan xardheynay 4 dalxiisayaal Ruush ah inay yimaadaan"
Duqa Erzurum Mehmet Sekmen ayaa sheegay in, de Markii aan la kulmay Dmitry Talanov, Consul General of the Russian Federation ee Trabzon, waxaan waydiiyay sida aan u keeni doono muwaadiniinta halkan. Kadibna waxaan samaynay heshiis ku saabsan 4 hadal. Marka la eego qodobadaas, waxaan xoojin doonnaa xiriirka fasaxa xilliyeed ee u dhexeeya Ruushka iyo Erzurum. Intaa waxaa dheer, dalxiisayaal Ruush ah ayaa u yimid ganacsatada Erzurum ama Erzurum si ay ugu safraan Ruush si habboon si loo hubiyo in shaqadeenu ay sii socoto. "
Ka dib dhammaystirka munaasabadda wareejinta, Duqa Erzurum Mehmet Sekmen iyo xubno ka tirsan saxafiyiinta iyo xarunta Palandöken Ski Centre ayaa sameeyay kormeer.
Maanta taariikhda: 3 September 1928 Kutahya-Tavşanlı ayaa bilaabay hawlgal ...